Maitiro Ekukanzura mota muDmv Mari, zvinodikanwa - Zvinyorwa
ndakachinja nhamba yangu pa iphone
sei wont iphone yangu tuma imessages
masvosve anoita sei ?? zvinoreva
zvinorevei 2 2 2 zvinorevei
Nzira yekunyoresa mota mune iyo dmv
DMV inonyoresa mota. Zvakakosha kuziva maitiro ekunyoresa mota paDMV . Iwe uchafanirwa kupa yako rezinesi ndiro uye kunyoresa mota yako kana watengesa mota yako kana uri kuronga kuibvisa munzira. Izvi zvinotaurira Dhipatimendi reMota Mota ( DMV ) izvo zvatove hausi muridzi yemotokari, iyo inokutendera kuti usabhadhara mutero uye zvimwe zvikwereti zvine chekuita nemotokari .
Tsvaga hofisi yeDhipatimendi reMotokari munzvimbo yako. Tarisa mumapeji ako ejena yeyero kuti uwane iri padyo newe.
Tora yako rezinesi, kadhi rekunyora uye zvitambi kuhofisi yeDMV kuvapa kwavari DMV mushandi . Zvirongwa zvitambi zvaunogamuchira kana iwe uchinyoresa mota yako neDMV. Aya masarudzo anoiswa pane yako rezinesi ndiro uye inofanirwa kuvandudzwa gore rega rega.
Zadza mafomu anoenderana. Rega mabharaki azive kuti iwe unoda kunyoresa mota yako zvakare.
Tumira tsamba yako yerezinesi, chinamirwa, uye tsamba yakasainwa inokumbira kuregererwa kuDMV. Bata hofisi yako yemunharaunda yeDMV kuti uwane kero yedunhu rako repakati chikamu. Tumira zvinhu zvako nenzira yekutakurisa nzira nechisimbiso chekuendesa. Kamwe chikumbiro chako chikagadziriswa, DMV inotumira tsamba inosimbisa kudzimwa. Ndokumbirawo uchengete tsamba iyi kune ako marekodhi.
Rezinesi rekudzorera fomu
Kana iwe uchibvumidzwa kuchengeta ako ekare marezinesi mahwendefa, rangarira kuvadzivisa kubva zvakachengeteka kana kuvaparadza . Iwe haudi yako marezenisi ekare ane hukama nemabasa ematsotsi Kana mumwe munhu akaibata uye oishandisa. Usango kanda ako ekare mariseti rezenisi marara .
maitiro ekuresa kunyoresa mota muTexas
Iko hakuna muripo wekumisa mota
Texas YeMotokari Yekutamisa Yekuzivisa
Pane nzira mbiri muTexas dzekuzivisa iyo TxDMV yawakatengesa kana yausingazoshandise mota yako: online kana netsamba. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo uye mafomu enzira yega yega yekuzivisa pazasi:
1) KUZADZISA Iyo TX MOTOR MOTO KUTAURA KUZIVISA PAZVINHU:
* PREFERRED METHOD * Kana zvichibvira, tinokurudzira kuti upedze mafomu epamhepo kwete nekutumira tsamba, kuti ugone kuchengetedza nekunyora kopi yemarekodhi ako anosanganisira zuva / timestamp. Pamusoro pezvo, painopedzwa pamhepo, risiti inogona kudhindwa kuti ive nechokwadi chekuti yagamuchirwa.
2) KUZADZISA KUZIVISWA KWEMAHARA MOTOR MOTORI TX NEMAIL:
Pedzisa uye uprinte iyo Texas Motor Vehicle Transfer Notification Fomu VTR-346.
Tumira fomu rakapedzwa ku:
TxDMV YeMotokari Musoro uye Kunyoresa Chikamu
Dhinda fomu yako yedzidzo yekudzosera mari. Izvi zvinokutendera kuti ubvise mahwendefa ako uye ugamuchire yakadzorerwa yakadzoserwa yemaplate ako. Tsvaga yako kero yenyika kuendesa yako yekare rezinesi ndiro (s) pamwe nefomu. Dzimwe nyika dzinongoda chete ndiro yekumashure kukanzura; mamwe haadi marata ekare zvachose.
Dzimwe nyika dzinoita kuti ukanzure uri munhu. Uya nemaplate ako kuhofisi yako yekupa marezinesi, pamwe nekadhi reinishuwarenzi razvino. Kana mahwendefa akabiwa, zivisa vakuru vemunharaunda uye enda nemapurisa kumhanho kuDMV panzvimbo.
Dhawunirodha uye zadza rakarasika Rezinesi Plate Afidhavhiti fomu. Izvi zvinodikanwa kuti usanyorese kana mapaiti ako rezinesi akarasika kana kubiwa. Zadza fomu uye wotumira kune yako registry registry kana kurizadza iwe pachako kune yako yemunharaunda DMV.
Ziviso yekuchinjisa uye kuburitsa chikwereti inondichengetedza sei?
Mushure mekunge DMV yawana ruzivo rwekuchinjisa, chero chikwereti chekutyorwa kwekupaka, kutyorwa kwemotokari, kana kukwirwa kwevanhu mushure mezuva rekutengesa rave iro basa remutengi anotevera.
Zvakare, hapana kumwe kunyoreswa kwekuvandudza ziviso kunozoendeswa kune yakataurwa mota.
Panyaya yematare edzimhosva kana yekukumbira, dare rine mutoro wekuona kana watevera mutemo uye uchiregererwa kubva kune vevanhu uye / kana mhosva yematsotsi.
Ndingaite sei kuti ndirege kugashira kunyoreswa kwekuvandudzwa kwemota iyo yandisisina?
Kana iwe ukatambira chiziviso chekuvandudza kunyoreswa kwemotokari iwe yausingachisiri wako:
DMV haina kugamuchira yako NRL.
Iyo NRL yakanga isina kukwana kana kusaverengeka.
Chero zvazvingaitika, unofanirwa kuendesa imwe NRL kuti rekodhi ivandudzwe.
Kunyoresa ziviso yekuvandudza makomputa anogadzirwa anopfuura mazuva makumi matanhatu pasati pasvika nguva yekupera. Dzimwe nguva, ziviso yekuvandudza uye iyo NRL inopindirana mune tsamba. Kana izvi zvikaitika, unogona kuendesa imwe NRL kuti uone kuti rekodhi yakagadziridzwa.
Kana iyo yekutanga NRL yakaiswa pamhepo, usatumira ziviso yekuvandudza kana peji rekusimbisa kudzokera kuDMV. Peji rako rekusimbisa humbowo hwekuti NRL yakatumirwa.
Usadzimise mota yako inishuwarenzi kudzamara waendesa rezenisi rako kuti udzivise faindi uye mubhadharo kubva kuDMV uye neako inishuwarenzi mupi.
Kuziviswa kwekuchinjiswa uye kuburitswa kwechikwereti kunondidzivirira sei?
Maitiro Ekuwana Mahara Chikafu Chitambi Mabhuku NeMeyili
Zvikwereti Zvemari Nezita Remota